Global Voices teny Malagasy » Serbia: Misafidy, na i Tadic na i Nikolic · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Desambra 2018 14:33 GMT 1	 · Mpanoratra Sinisa Boljanovic Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Amerika Latina, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Karaiba, Bahamas, Barbady, Bermuda, Jamaika, Kiobà, Rosia, Serbia, Syria, Trinite sy Tobago, Fampandrosoana, Fifidianana, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Haisoratra, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Mozika, Politika, Tanora, Tantara, Teknolojia, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
Manohy ny fampielezankeviny mialoha ny fifanandrinany amin'ny fihodinana faharoa hotanterahina ny 3 Febroary i Tomislav Nikolic , mpifaninana ho filoham-pirenena avy ao amin'ny Antoko Radikaly Serba (SRS)  sady lefitr'i Vojislav Seselj , voatana any amin'ny Fitsaran'i La Haye , sy i Boris Tadic , Filoha Serba amin'izao fotoana sady mpitarika ny Antoko Demokratika (DS) .
Nilaza tao amin'ny Gazety mpivoaka isan'andro ao Belgrade, Danas, i Mladjan Dinkic , minisitry ny toekarena ao Serbia (22 Janoary):
Matahotra ny fiverenan'ny politika nasionalista ao Serbia nisy tamin'ireo taona 90 i Jasmina Tesanovic. Nanoratra  izy ny 29 Janoary:
Hifidy an'i Boris Tadic aho amin'ny fihodinana faharoa. Manana tahotra goavana an'ilay [raharaha Aventino  (rohy maty)] aho. Tamin'izany, namela ny parlemanta Italiana ny mpanohitra rehetra avy ao amin'ny demokratika ary nankany Aventino – ilay havoana akaikin'i Roma. Io no fanoherana ireo vondron'ny mpitandro filaminana fasista, izay namono ilay nasionalista [Matteotti ], anivon'ireo hafa, tamin'ny 1924. Nanohitra ampahibemaso ny halatra tamin'ny fifidianana tamin'ny taona nialoha io ihany koa izy. Nampiasa ity toedraharaha ity hakàny ny fahefana i [Mussolini ]. Hainareo ny zava-nitranga taorian'izay […]
Mieritreritra i Nebojsa Milenkovic raha hanohana an'i Tadic na tsia. Nanoratra  tao amin'ny bilaoginy B92 izy ny 23 Janoary:
1. Momba ny andraikitra ara-politika ny demokrasia. Izany no antony mahatonga an'i Boris Tadic tsy maintsy manome tatitra momba ny asany taloha, hanekeny ny hadisoany sy hanomezany fomba fijery ara-politika raha tiany hifidy azy isika. Ny misy anefa dia manana fampimiràna  ahitàna singa roa tsy fantatra isika. Na izany aza, raha manan-tsafidy haka ny iray tsara kokoa amin'ireo mpifaninana roa ratsy ireo ny mpifidy, maro amin-dry zareo no tsy handeha any amin'ny biraom-pifidianana mihitsy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/12/131697/
 Antoko Radikaly Serba (SRS): http://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Radical_Party
 Fitsaran'i La Haye: http://www.un.org/icty/
 Boris Tadic: http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Tadi%C4%87
 Antoko Demokratika (DS): http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(Serbia)
 raharaha Aventino: http://www.personal.psu.edu/cin1/COMPLETE%20LECTURE%20ON%20FASCISM.htm